एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ ? त्यसो भए यस्ता खाना खानुहोस् – Hamrosandesh.com
आजको दैनिकीमा मानिसहरु व्यस्त जीवन जिइरहेका छन् । आफ्नो स्वास्थ्य र शरीरलाई भन्दा पनि कामलाई महत्पूर्ण ठान्नाले मानिसहरु विभिन्न समस्याले घेरिएका पनि हुन्छन् ।
तर, अधिकांश मानिसहरु आफ्नो स्वास्थ्यमा सचेतता अपनाइरहेको पनि पाइन्छ । स्वास्थ्यलाई चुस्त दुरुस्त राख्नाका लागि उनीहरु दिनहुँ व्यायाम गर्नुका साथै जुम्बा डान्स तथा अन्य डान्सलाई पनि निरन्तरता दिएका छन् । साथै प्रकृति प्रेमीहरुले हाइकिङ जाने समेत गर्दछन् ।
आउनुहोस् व्यायाम गर्दा कस्ता खानेकुरा खाने त ?
व्यायाम गर्दा हाम्रो शरीरमा रहेको पानी पसिनाद्धारा बाहिर निस्कन्छ । त्यसकारण पनि प्रसस्त पानी पिउनु आवस्यक हुन्छ । साथै जुम्बा डान्स गर्दा भने बढी पानी नपिउन स्वस्थ्यविज्ञ सल्लाह दिन्छन् । एकपटकमा २ सय ५० देखि तीनसय मिलिलिटर सम्म पानी पिउनु राम्रो हुन्छ । साथै दैनिक पाँच लिटरसम्म पानी पिउनु राम्रो हुन्छ ।
त्यसैगरी खानपानमा पनि बढी ध्यान पुर्याउन जरुरी हुन्छ । व्यायाम गर्दा सप्लिमेन्ट्री मात्र नभई प्राकृतिक खाना समेत जरुरी हुन्छ । त्यसकारण दैनिकी जीवनमा सन्तुलित भोजनमा जोड दिनु पर्दछ । सन्तुलित भोजनमा दैनिक रुपमा काब्रो हाइड्रेड, प्रोटिन जस्तै दूध जन्य पदार्थ, अन्डा र चना आदि प्रमुख मानिन्छन् । यसरी व्यायामसँगै खानाको सन्तुलन मिलाएमा स्वस्थ्य चुस्त र दूरुस्त हुन्छ ।